Mafuta Sketch, Mari Pro uye Dudziro 3 yeSafari, iri kutengeswa nhasi | IPhone nhau
Mafuta Sketch, Mari Pro uye Dudziro 3 yeSafari, iri kutengeswa nhasi
Tinoenderera mberi svondo rino matiri kutoburitsa mashandiro matsva ne zvimwe zvinopihwa uye kushambadzira pamitambo uye kunyorera Yedu iPhone, iPad uye, chokwadika, iPod touch zvishandiso, chishandiso icho chatinowanzo kanganwa kutaura nezvacho. Uye nhasi tinozviita nemaapplication matatu anonyanya kubatsira: mupepeti mupepeti, maneja wezvemari wega uye muturikiri wewebhu
Usakanganwa kuti zvese zvinopihwa izvo zvaunoona pazasi zviri Nguva Yakatemwa. Kubva IPhone nhau Tinogona chete kuvimbisa kushanda kwayo panguva yekutsikisa ichi posvo, asi kwete gare gare sevanogadzira vasingape ruzivo irworwo. Naizvozvo, rairo yedu ndeyekuti, kana iwe uchifarira, dhawunirodha nekukurumidza sezvazvinogona kuti ubatsirwe nemutengo. Kana zvisiri izvo zvawaitarisira, unogona kudzosa ivo uye kudzorera mari yako.
1 Sketch yeMafuta
2 Mari pro
3 Dudziro 3 yeSafari
Takatanga ne «Oiri Sketch», inoshamisa application yaunogona nayo chinja mifananidzo yako ive yakanaka uye yepakutanga mafuta pendi uye kunyangwe uzvitumire sekadhi rekuposita chero kupi zvako pasi. Ingosarudza pikicha kubva kune yako reel uye utore zvakananga pikicha uchishandisa kamera mune yekushandisa, isa sefa uye ichave pendi yemafuta iwe yaunogona kugovanawo pasocial network, mameseji, email uye zvimwe.
"Oiri Sketch" ine mutengo wenguva dzose we € 3,49 asi ikozvino unogona kuiwana chete € 1,09.
OiriSketch - Watercolor Mhedzisiro2,29 €
«Mari Pro» chikumbiro chemari chinokubatsira maneja uye ronga yako yekubhadhara uye mavovoice, ronga mabhajeti, chengetedza yako yemari mari uye zvimwe zvakawanda. Iyo inowirirana pane ako ese zvigadzirwa uye ine zvisingaverengeke mabasa iwe aunogona kutora mukana kune ese ari maviri emhuri hupfumi uye mune ako ehunyanzvi maakaunzi.
"Money Pro" ine mutengo wenguva dzose we € 5,99 asi ikozvino unogona kuiwana chete € 3,49.
Mari Pro: YeMunhu Mari5,49 €
Dudziro 3 yeSafari
Uye isu tinopera neapp iyi yatakatokuudza nezvayo pane imwe nguva. Kana iwe wakarasikirwa nemukana wekuuwana mahara, ikozvino une mukana mutsva wausingafanire kupotsa. «Dudziro 3 yeSafari» ishambadziro yeSafari yaunogona nayo dudzira mapeji ese ewebhu mumitauro inopfuura zana, asi chenjera, nekuti handiro chete basa.
"Dudziro 3 yeSafari" ine mutengo wenguva dzose we € 5,49 asi ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Dudziro 3 yeSafari5,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Mafuta Sketch, Mari Pro uye Dudziro 3 yeSafari, iri kutengeswa nhasi
Luis Guevara akadaro
maviri ekutanga haana kusununguka uye yekupedzisira nekutadza ndeye mahara uye Pro vhezheni yacho inobhadharwa.
Pindura Luis Guevara
Ehezve, kana vari "yakatemwa nguva" zvinopihwa, izvo zvatakatoyambira pakutanga. Unofanira kukurumidza sezvinobvira. Zvirokwazvo imwe nguva iwe une rombo rakawanda. Zvakadaro, vagadziri vanofanirwa kuratidza kuti zvinopihwa zvinoramba zvichishanda kwenguva yakareba sei, vashandisi vanozvikoshesa kwazvo.
Amazon inoderedza mutengo weayo 4k zvemukati kuenderana neApple's
Vazhinji vashandisi vanogunun'una nezve kusashanda zvakanaka, kunonoka uye matambudziko ebhatiri neIOS 11